Forge အရည်ကျိုမီးဖို, ဓါတ်ငွေ့ Generator ကို, Reheating အရည်ကျိုမီးဖို - Yinuo
ဓာတ်ငွေ့ Generator ကို
အားသာချက်များ: အမြင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းထိရောက်မှု, ထုတ်လွှတ်ပစ်မှတ်အမျိုးသားရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွှန်းများအောင်မြင်ရန်ရောက်ရှိဖို့; အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်မြင့်မားတိကျစွာအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်; တစ်လအထက်များအတွက်အပူချိန်, ဖိအားနှင့်နှိုးဆော်သံ၏စံချိန်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အမှားနှိုးဆော်သံမှတ်တမ်းများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူမြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်, nozzle ၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်, အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များ။ အနှစ်ချုပ်: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး, အလိုအလျောက်မြင့်မားဒီဂရီမြင့်မားထိရောက်မှု, လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ?...
မီးဖိုထဲက reheating တရုတ်စက်ရုံ OEM လမ်းလျှောက်ရောင်ခြည်
အပူကုသမှုပျံ့နှံ့နေတဲ့ထင်းမီးအမျိုးအစား Hot Air ကို ...
1) လျင်မြန်စွာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှတပါး, မီးဖိုထဲထအပူ, အရေးကြီးတဲ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် Feature ကိုအနားသပ်အရည်ကျိုမီးဖို, အိမ်ခေါင်မိုး, ဘက်နှင့်ကျောသောမြို့ရိုးနံရံမီးဖိုအောက်ခြေမှာနှင့် bogie အစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်မီးဖိုထဲ frame ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့် structure.To အပြည့်အဝဖိုင်ဘာချမှတ် မီးယဉ်အမျှင်ဖြင့်မံအုတ်အဆောက်အဦ။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး: အေအလင်းအလေးချိန်နည်းအပူသိုလှောင်မှုခကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာ, မီးဖိုမြို့ရိုးကိုမီးဖိုထဲအပူချိန်မြင့်တက်ဏ၏ (ဘေးထွက်မျက်နှာပြင်အနိမ့်-အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ် ...
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်နည်းပညာ Co. , Ltd Xuzhou မြို့၏လှပသောရှုခင်းတွင်တည်ရှိသည်။ Jiangsu ပြည်နယ်မြင့်နည်းပညာအသစ်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်, စက်ရုံထက်ပို 50000 စတုရန်း melers ၏ဧရိယာကိုတည်ဆောက်ခြင်းထက်ပို 70000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း, fixed ပိုင်ဆိုင်မှုသန်း 100 ယွမ်, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် lechnical နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး welding အရည်အသွေးကိုန်ထမ်းထက်ပို 400 ကလူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံခိုင်မာတဲ့နည်းပညာပိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီးကျော်ကို 10 utility ကိုမော်ဒယ်၏ palents နှင့်တီထွင်မှုနည်းပညာစတာတွေရှိပါတယ်
ယေဘူယျအားဖြင့်အပူပေးမီးဖိုသည်အောက်ဖော်ပြပါအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မီးဖိုအတွင်း၊ ပစ္စည်းစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလေဝင်လေထွက်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ မီးခိုးကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့်အအေးစနစ်။ စွန့်ပစ်အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အသုံးချကိရိယာ, etc ပြန်လည်ထူထောင်အပူမီးဖိုမီးဖို ...
သံမဏိကိုလှိမ့အပူအပူပေးသောမီးဖိုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအာရုံစိုက်ဖို့တိကျတဲ့ contents တွေကိုဘာတွေလဲ? လူများစွာသည်သံမဏိလှိမ့်အပူပေးသောမီးဖိုကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသလား။ လူအများအားခွဲစိတ်မှုအမှားများမပြုလုပ်မိစေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာတားဆီးနိုင်ရန်လူအများစုတို့သည်သတိထားသင့်သည်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
Changcheng လမ်း, Xuzhou အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်၏တတိယစက်မှုပန်းခြံ၏မြောက်
လက်စွပ်အရည်ကျိုမီးဖို, သဘာဝဓါတ်ငွေ့အရည်ကျိုမီးဖို , စက်မှုလျှပ်စစ်အရည်ကျိုမီးဖို , Continuous Annealing Furnace, နှစ်ဦးအဆင့်ကျောက်မီးသွေး Gasifier , Steel Hardening Furnace,